Global Voices teny Malagasy » Notanan’i Shina Ilay Mpisolovava Rehefa Avy Nanatrika Fivoriana Tao Tiananmen · Global Voices teny Malagasy » Print
Notanan'i Shina Ilay Mpisolovava Rehefa Avy Nanatrika Fivoriana Tao Tiananmen
Voadika ny 10 Mey 2014 0:10 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nogadrain'i Shina ilay mpisolovava malaza Pu Zhiqiang  noho izy voampanga ho “nampisy korontana,” hita fa fikasana hanakana ireo mpikatroka tsy hankalaza ny fitsingeran'ny faha-25 taonan'ny famoretana ny fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia tao amin'ny Kianjan'ny Tiananmen izany.
Araka ny filazan'ny gazety South China Morning Post , nogadrain'ny polisin'ny Beijing tahaka ny mpamono olona i Pu Zhigiang rehefa avy nanatrika ny fivoriana ho fahatsiarovana ny famoretana ny hetsika hoan'ny demaokrasia 1989 sy “handinihana  ny halaliny sy ny vokatr'izany ary hitaky ny amin'ny hanaovana fanadihadiana mikasika ny marina tamin'ny 4 Jiona.”
Farafahakeliny olona 15 – mpampianatra ambony, mpikatroka sy havan'ireo lasibatra namoy ny ainy nandritra ny famoretana tao amin'ny kiajan'i Tiananmen – no nanatrika ny fivoriana natao tamina tranon'olo-tsotra tao Beijing tamin'ny 3 Mey 2014. Olona dimy hafa farafahakeliny no nalaina natao famotorana taorian'ny fivoriana.
Sarin'i Pu nandritra ny fihetsiketsehana 1989 tao Tiananmen. Sary nivezivezy tao amin'ny Twitter .
Olo-malaza tamin'ny hetsika Weiquan i Pu, nanao fisoloam-bava ireo mpanoratra sy mpanoratra an-gazety tamin'ireo raharaha goavana, anisan'izany ny raharaha momba ilay mpanakanto Ai Weiwei. Niseho tamin'ny gazetiboky izy tamin'ny fitarihany ny hetsika manohitra ny tobim-[panandevozana] mpiasa.
Noho ny tsikerany mivantambatana ataony mikasika ny politika ofisialy, narahin'ny polisy maso i Pu Zhigiang, ka notànana sy natao famotorana imbetsaka. Noraràna  tsy hiditra tamin'ireo sehatra bilaogy madinika ao Shina izy tamin'ny 2013 rehefa nampiasa izany ho fitsikerana ampahibemaso ny mpitarika efa misotrorononon'ny Antoko Komonista Zhou Yongkang .
Nandray anjara tamin'ny hetsika hoan'ny demaokrasia tamin'ny 1989 ihany koa i Pu tamin'izy mbola mpianatra.
Mbola voasivana ao Shina izay vaovao rehetra mikasika ny hetsika Tiananmen. Ny fikarohana ny voambolana “Tiananmen” ao amin'ny bilaogy madinika malaza Sina Weibo dia mampiseho hafatra milaza fa tsy hita ny fikarohana atao araka ny lalàna mifandraika amin'izany sy ny fitsipika manankery.
Mpisolovava marobe no naneho ny ahiahiany manoloana ny tranga mahazo an'i Pu Zhigiang ary nitaky ny famotsorana azy tao amin'ny habaka Weibo. Na dia izany aza, marobe ireo hafatra manohana an'i Pu no voafafa.
Voafafa haingana ny hafatra nalefan'ilay mpisolovava ao Bejing Deng Shulin :
Tokony havotsotra i Pu Shiqiang. Ny fisamborana ireo mpisolovava ve no torolalana vaovao amin'ny fanadiovana ny tontolon'ny fitsarana?
Mpilalao horonantsari-mihetsika malaza Shinoa Zhang Ziyi nangataka  tamin'ireo mpanjohy azy ao amin'ny Weibo mba hijery horonantsary mikasika ny fomba fanandratan'ireo mpisolovava ny rariny:
“Ilay mpanoro-hevitra”, tantaran'ilay mpisolovava manana ny hajany izay mitolona ho amin'ny demaokrasia, ny fanajana ny lalàna sy ny rariny. Nalaina avy amin'ny tantara marina mikasika ny filoha Koreana teo aloha Roh Moo-Hyun ny horonantsary. Tsy ilaina ny mamerina azy eto mikasika ny hatsaran'ny horonantsary, fa andeha jereo ny votoatiny!
Maya Wang, avy ao amin'ny Mpanara-maso ny Zon'Olombelona naneho hevitra tao amin'ny Twitter :
Detention of Pu and others r the best ads for the 25th anniversary & is attracting exactly the kind of attention the authorities don't want.
— Maya Wang ?? (@wang_maya) May 6, 2014 
Dokambarotra tsara indrindra amin'ny tsingerintaona faha-25 ny fanagadrana an'i Pu sy ny hafa ary mahasarika indrindra ny saina amin'izay tsy tian'ny manampahefana hiseho.
Mpanao gazety Sui-Lee Wee  nilaza lahatsoratra iray nosoratan'i Pu tao amin'ny Twitter:
— Sui-Lee Wee ??? (@suilee) May 6, 2014 
Fotoana mety hamakiana ny boky nosoratan'i Pu momba ny 4 Jiona. « Raha manadino ny tsirairay, moa tsy hanokatra varavarana hoan'ny vono olona hoavy ve isika?»
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/05/10/59659/
 Pu Zhiqiang: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_Square_protests_of_1989
 South China Morning Post: http://www.scmp.com/news/china/article/1505724/activists-held-questioned-police-after-commemorating-tiananmen-crackdown
 Zhou Yongkang: http://fr.wikipedia.org/wiki/Zhou_Yongkang
 Deng Shulin: http://weibo.com/u/3685615842
 Maya Wang, : https://twitter.com/wang_maya/status/463649229139742720
 May 6, 2014: https://twitter.com/wang_maya/statuses/463649229139742720
 Sui-Lee Wee: https://twitter.com/suilee/status/463563161254125568
 May 6, 2014: https://twitter.com/suilee/statuses/463563161254125568